Caaraan hundi Oromoo biraa darbee diina keenya harka galuu hin qabu.
Oromoon lola fi waan hundaaf of qoophesuu qaba.
Yeeroo ummani keenya akka kana biyya keessati ajeefama jiru, biyya bayee rakkata jiru, wayyane of xalaftee of kufisaa jirtu kana kara walaka dhabanee haalaa ilalachuun garii miti.
Namoon bayeen amoo Bilisummaa isaanfi qabsa’uuf malaqa fi badhasa adda barbaduu. Kun kan nu argisisuu hubannoo sabi keenya bilisumma fi walabumaaf qabuu heedu xiiqa ta’uu isaati. Habasha Oromoo malaqan bitee yerro of jala hirirsuu egalee kana keessa Oromooo wayee garaa isaa odeesuu bilisummaaf qoophi miti lamii isaafuu faraa. Nama garaa isaa jalatuu irra diina sii dura dhabatuu wayaa. Oromoon qabsoo dheera gegessan milka’uu dadhabban hanqinaa oogana qoofan utuu hin tanee hubanoo uumanii keenya qabuu xiiqaa ta’uu, kaka’uums fi murannoo qabsoof qabuu xiqaa ta’uu isaatiin. Dargagoon Oromoo dhugman bilisummaa barbadan atataman dogogra isaan of qeequu fi of siireesuun uumataa isaan siireessan ijarani oganuu qabu.
Qabsoon Obsa fi Murannoo gafata Arifachuun bu'aa isaa irra gaga’ama isaatu bayyata. Namoon bayeen amoo kara walaka dhabtan gara itti qileensayee egacha jiru. Dargagoon Oromoo kana birra darbuuf of gurmeesuu, wal damaksuu, wal barsisuu, Habasha sochishe hordofan fashaleesuu, Oromoo dhaabbilee Habasha kami iyuu jala akka hin hiriree goochuu. Wayyane Amanan Filaanno Soba kessa seenuu hin qaban. Bakka humna hin qabneeti ykn bakka mootuuuman ala waliin hin mari’atameeti, jijirami birran bakka hin dhufneti fallaanno sanyi bara 2005/1997 sun yoo ta'ee bu'aan isaa ilee sanuma ta'aa. Waan bu'aa fi jijirama hin finneeti uumataa keenya ofuu fi wareegama hin tanee basisuun hin feenuu. Yeero lama dogogorun garii miti. Waan hojeenuti ittigafatamuma fudhacha adeemuu qabna.
Wayyanen kufee jira, uni amoo akkuma baratamee gaafa diini keenya kufuu jala ga’uu of keenya wal nyanee diinafi caaraa lana. Oromootu Siirti marii hin beeku, Yeero hunda dhumaa irrati xaba baleesuu amala goodhatan. Ammaa egalee dandi ittin senamu fi ummataa keenya biraa ittin geenyu haala mijeèfachuun murtessadha. Kanaafi jeeneen halkan guyya dargaggoo Oromoo cinqa jira namoon galuuf didee ijoole waan Bosonati geesuu itii fakatee sodate ture. Garuu durmua kaafnee gurrma’aa ijarama, qoopha’aa jeecha ture malee Bosona deemaa hin jeene booson keenya Magala keessa gaafa rakkon tokko kayee akka waakoo lafa jiru ol burqudha.
Dargaggoon Oromoo waan hundafi of qoophessa, diini keenya ofiin of xalafee akka of kufisuu paarlamaa keessati afaan fi barreefaman itti himnee ture. Bareefama sun kan harkati fudhatan keessa Arkabee Equbay, Adisu Legasee, Girma Biruu fi Dr. Abara Dherssati. Oogannoon TPLF hundi baduu egalan kun waan dhufaa jiru fi kufati TPLF erga mirkaneefatan booda.
Dhaabilee Oromoo hunda caalaa feedhi fi gaafi uumataa Oromoof durasa keenuu;
Feedhii angoof bololi’un Oromoo akka midhuu hubachuun abbaan Angoo Ummataa Oromoo ta’uu amanani bilisummaaf hojeecjhuu;
Warii biyya galuu barbadaafi warii biyya jira dhaabbilee habasha jala hiriruu dhisaan halaa duree tokko malee tokko ta’uu humna isaan biyaa keessa galchuu;
Warii alan loluu barbadan amoo haalaa duree tokko malee wal ta’aan loltuu fi humna isaan bosona Oromiyyati biyaa galchuu;
Dhaabilee Habasha kam iyuu amanuu dhisuu;
Dargaggoon Oromoo yeeroo hunda halkan fi guyya qoopha’uu dha.
Mootummaa kufufi deemu kana yoo xinnatee gandaa fi aannaa keessa jirtan bilisoomsun diraqama.
OPDO akka diina hamati fudhachuu irra akka isaa gara uumataa Oromoo goran goochuu;
Meeshan lafa jiru fi akkati to’aanuu fi namoota hidhachuu danda’aan qoophefachuu;
Loli ta’uu malu hunada waliin ta’uu mala hundi Oromoo bituu barbadaa waan ta’ee Oromoo lafa isaa dhunfatee biyatii bulchuuf qoophi ta’uu qaba.
Oromoon hundi loltuu ta’uu qaba. Biyya isaa dhunfachuuf of qoophesuu qaba.
Itti fufaa Nu hordoofa?